Ukunciphisa, iindleko eziphantsi kweekgentimitha ze-GPS ezichanekileyo - Geofumed
Ukunyanzelisa, ukuchithwa kwexabiso eliphantsi kwe-GPS centimeter
Ngo-Okthobha, 2012 GPS / Izixhobo, Topography
Kungekudala le mveliso yenziwe kwiNgqungquthela yomsebenzisi we-ESRI eSpeyin, nje ngeveki ephelileyo kwaye oku kulandelayo kuya kuba kwiCartCart yaseMadrid.
Yinkqubo yokubeka i-GPS kunye nenkqubo exhasa ulondolozo lwentsebenzo emva kokuba kufikelelwe iinkcukacha ezingamamitha angama-centimetric. Akukho nto enye i-system engayenziyo, kodwa yintoni ebambe ingqalelo yethu yintengo.
Eyona nto, ifowuni isebenza njenge-logger. Ixhunyiwe kwi-antenna yangaphandle kunye nokuthatha imilinganiselo ebonakalayo yomgama kuma-satellites kwiifayile ezikhutshelwa nge-USB kwikhompyutha. Ixhasa idatha yeengongoma, iindlela kunye nama-polygoni, ngokuba oku okugqibela ibala iindawo.
Ubukhulu i-iPod, ukukhanya kakhulu, kangangokuba uyakwazi ukuphatha epokothweni okanye libekwe kunye Velcro kwi le chap ukuba ifakiwe, nto leyo ngokulula ukwenza imilinganiselo ukuhamba izandla zakho free.
Ukwahlula kwalokhu, kunye ne-logger yendabuko, njengalowo osetyenziswa yizithuthi ezilandelelanayo (ibhokisi elimnyama), ukuba loo milinganiselo eluhlaza ibhalwa kunye nalawo angathunyelwa emva kwexesha.
Ngokufanayo, i-GPS-uhlobo lwebhrawuza lithatha isikhundla, ngokuchaneka phakathi kwe-3 kunye ne-5 yamitha kodwa engayi kuphuculiswa.
Idatha ekhutshwe kwi khomputha zifayile eziqulethe imilinganiselo eluhlaza kumgama we-satellites (i-pseudorange kunye nesigaba sokuphatha), ngaphandle kwemilayezo ye-NMEA. Ngaphandle kwenkqubo yokucwangcisa, ukuchaneka kwe-NMEA kungcono kune-standard standard ye-GPS, enikezwa ukuba i-antenna yangaphandle iyanciphisa kakhulu ingxolo yokulinganisa.
Ziziphi iinkcukacha ezifumanekayo
Ukongezelela, i-Posify inikezela ngeenkonzo zokuthunyelwa kwithuba emva kokuba ulwazi oluthunjiweyo luhanjiswe kwaye lubuyiselwe kwimodi eyahlukileyo ngokubhekiselele kwizikhululo ezibhekiselele kwi-GPS.
Amacandelo anokufikelela kuwo:
I-20 ukuya kwi-30 centimeters yokuhambisa imilinganiselo
I-2 ukuya kwi-3 centimeters ngokulinganisa kwe-static
Ukuchaneka ngokucacileyo kuvela kwi-2 ukuya kumaxesha e-3 ukuchaneka okuthe ngqo.
Idatha ifika kwifom ye-kml kunye nefomathi yefomathi. Ukongezelela, ulwazi olunxulumene ne-postprocess, kwimeko yamacandelo enye, ngamnye ugcina ulwazi olunjenge-latitude, ubude kwiifom zefomathi / imizuzu / imizuzwana nakwiimimiselo. Kwakhona i-ellipsoidal kunye ne-orthometric altitude, u-UTM ukulungelelanisa, inani lama-satellites abonakalayo kunye nokuchaneka ngokuchanekileyo emva kokuqhutyelwa kweposi.
Uninzi kangakanani ukuPhatha
Ukunciphisa iindleko ze-326 ze-Euro, kunye neerhafu, ngokupheleleyo malunga ne-395 Euros. Oku kubandakanya:
I-Posify logger. Oku kuzisa ikhadi le-SD le-4 GB, elingazigcina kwiiyure ze-1,300 zokurekhoda okungapheliyo.
Ibhethri yangaphakathi ye-lithium isekela kwiiyure ze-12 zokusetyenziswa kwaye ihlawulwe kwiiyure ze-4 ..
I-GPS ithola idatha kwi-L1 imvamisa ukuya kwii-50 iziteshi, kunye nekhowudi ye-UBX / NMEA ebhaliweyo kunye nefomathi yesibini.
I-antenna ye-magnetic yangaphandle ne-cable ye-1.50 yamitha, uxhumano lwe-SMA.
Isitya se-metallic base-antenna, kunye ne-10 cm. ububanzi.
Ikhebula le-USB / micro-USB
Isikhuselo «somkhosi» esine-velcro yokuthwala i-antenna kunye ne-velcro eyongezelelweyo
Akubandakanyi ishaja se-USB, kuba ukuba ungasebenzisa ishaja nayiphi na into esiyiyo ngokuqinisekileyo esininzi kwikhefu yeselula esisithengileyo.
Ukuze kwenziwe i-post-processing, i-99 Euros ngonyaka ihlawulwa. Unyaka wokuqala ukhululekile, kuba udibene nokuthengwa kwezixhobo.
Yintoni engeyona iPosify
Kuyaqondakala ukuba ifowuni yamukeli wedatha. Ayinayo isikrini ukuba uphendule njengoko kwenziwa ngezixhobo eziqhelekileyo. Nangona uqikelele ukuba ngoku kukho nawuphi na umakhalekhukhwini udibanise i-GPS, amathuba anokuthakazelisa.
Njengomzekelo, ingasetyenziselwa ukudlulisa ulwazi ngexesha langempela kwi-Smartphone.
Ngaphandle kokurekhoda iifayile kwi-disk yangaphakathi, i-Posify logger inikeza ulwazi lwenkcazelo yangempela malunga nama-satellites nge-USB port. Olu lwazi (idatha) luquka ikhowudi kunye nemilinganiselo yesigaba, kunye nemilayezo ye-NMEA yesisombululo esiphezulu seGPS. Idatha ye-USB (imilinganiselo kunye nemilayezo ye-NMEA) yenziwa ngokufanayo kunye nokurekhoda kweefayile (nganye yesibini). Idatha ye-USB yenziwe ngokusisigxina kungakhathaliseki ukuba logger urekhoda iseshoni yesilinganiselo okanye cha. Oko kukuthi, ngokukhawuleza xa i-logger ivuliwe, i-port yase-USB ivelisa umlinganiselo rhoqo.
Oku kunokwenza izicelo ezininzi, ukuxhuma i-logger kwi-laptop okanye kwisigxina se-mobile (PDA, smartphone):
Ukubonakaliswa kwimo yenkqenkqo yeGPS kwiskrini (ukusuka kwimilayezo ye-NMEA)
Imilinganiselo yokurekhoda ngokuqhubekayo kwikhompyutheni (isitishi sesithenjwa)
Ukumiselwa ngexesha langempela (Isiganeko sangempela seKinematics okanye i-RTK)
Isalathisi sibonisa ukubonakalisa i-GPS satellites ngexesha langempela kwi-smartphone. Isicelo sinikeza ulwazi malunga nenani lama-satellites ngokujonga, i-azimuth kunye nokuphakama kwawo, kunye namandla ophawu lwawo. Kuyinto enomdla ukujonga i-DOP (Dilution Of Precision), eyona xabiso ebonisa ijometri ye-GPS yeenkwenkwezi: i-DOP ephantsi kakhulu i-geometry ye-satellites yokubeka ukuchaneka.
Okwangoku kuphela eSpeyin. Isebenza kunye neesithenjwa ze-GPS ze-180 zesalathiso zisasazeka kwinxalenye enkulu yelizwe laseSpain. Uthungelwano luquka izikhululo zeSizwe seGraphic Institute (IGN) kunye nezo ezininzi zeZizwe ezizimeleyo
Posify isebenza ngqo kwi ETRS89 Spanish inkqubo esemthethweni eziziintlobo ngeentlobo lokuphakama / yobude. Ixabiso Ellipsoidal ukuphakama (ellipsoid GRS80) kunye orthometric okanye ixabiso ngaphezu komphakamo wolwandle (igosa geoid EGM08-REDNAP) inikezelwa
Kubonakala umkhiqizo onomdla, oza kulandelwa ngenxa yokuba siya kukwazi ngakumbi ngabo.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Georeferencing yeepropati zasemaphandleni
Post Next I-GeoConverter idibaniswe kwi-CONDOROkulandelayo "
Iimpendulo ze-51 "Ukunyanzelisa, ukuchithwa kweendleko eziphantsi kwe-GPS cm"
Aquileo Cruz Paulino uthi:
NDIFUNDA EMEXICO NDAKHONA NGOKUBHALWA KWI2.0
Yintoni eyenzekayo kwiPosify? Ingabe idayiswa? Ingaba i-website yekhonkco engenhla iyakhiwa? Ndiyakuthanda ukuthenga iipayili zezixhobo. Ngaba umntu owaziyo nayiphi na umnxibelelwano apho ungathumela khona?
Ukubulisa kunye nokubonisana ukuba unomhla othengiswayo eMexico, okanye ndingathanda isiluleko se-GPS yophicotho lwe-cadastral ngokuchanekileyo
Jaime Jarquin uthi:
nceda ukuba umntu unolwazi apho angayithengela khona, ndineminyaka eyi-2 ndikhangela le mveliso kwaye andinakufumana nto, iincwadana ezifundisayo nje, okanye ngaba yi-troll ????
SEBASTIAN JUSTRIBO FORTON uthi:
Hi Javier ukwazisa kum njengoko ekuyalela ukuba ufumane POSIFY kubona apho ukuya KUNGXAMISEKILE kum Ndithenga ngokukhawuleza kwaye nebar owesibini. Ngombulelo oluninzi
RAUL DE LA PEÑA BORDA uthi:
Kuya kuba ngumdla kakhulu ukufumana le (GPS) Vula ngokuchanekileyo, iindleko zenkqubo yenkqubo yeposi zixabisa malini, ngaphandle kwenkqubo yeposi ihlawulwa i-99 Euro, ukuba andinawo umsebenzi kwiinyanga ze6. Ibiza kakhulu.
Kuya kuba ngumdla ukufumana i-20 ukuya kwi-30 cmt. Ukujonga ngokuthe ngqo ngaphandle kwenkqubo yeposi. Intengiso kufuneka ibe seLima Peru. Enkosi
I-Posify? Andinakufumana nto
UJan Carlos Cubero uthi:
I-Central America ngokukhethekileyo eCosta Rica, sinethemba lokuba sinceda apha ababameli bafuna ukuhlawula izixhobo ze-GPS.
UAlejandro Ruiz Valencia uthi:
Ngaba iyafumaneka eKolombia kunye nabameli?
Domingo Fernandez uthi:
De Javier de Lázaro.
Ndiyakuthanda ukuthenga loo mveliso.
Ngaba unganditshela apho kuthengwa khona?
Fumana ukubulisa okufudumeleyo.
UMarco Gómez Del Valle uthi:
Ndoda Javier de Lázaro Ndiyathemba ukuba ungayifaka eChile.
Kuyinto enomdla kakhulu ukusetyenziswa kwayo ukuqinisekisa ubungqina bemayini kunye nokusetyenziswa kwi-geology (ukuhlola), njengamanye amancedo.
Ndiya kubulela ukubonisa indlela endinokuyithenga ngayo kwaye xa iya kutholakala eChile.
UMarco Gómez Del Valle
nceda ndifuna ulwazi kum mexico,
Francisco Correa Nieto uthi:
Yiyiphi inkqubela eyenziwa ngokutsha (uDisemba - 2015)
Ndiyabona ukuba ixhunyiwe kwi-smartphone inokusebenza kwi-RTK, ngoko ke sinokuyenza? Ngaba ukuchaneka kweli phepha kuya kuba yi-20 kwi-30 cm?
Kwi-static, kufuneka sihlale ixesha elingakanani kwi-point ukuze sifumane iinkcukacha ze-2 kwi-3 cm?
Neptali Arteaga uthi:
Imibuliso.- Inomdla, siyayidinga ngomsebenzi we-topographic. Njengoko siphakathi embindini we2013. Ndingayivuyela kakhulu into yokuxela oko kufikelelweyo ukuza kuthi ga ngoku, malunga nokusetyenziswa kweGPS Positive eLatin America. Ukuba sele iyithengiwe kwiQuito Ecuador nguMzekelo.
Ndicinga ukuba i-gps fosy intle kakhulu. Ndingathanda ukwazi ukuba ikho njani iColombia, okanye ukuba iya kufumaneka nini kule ndawo. Enkosi kakhulu ngolwazi lwakho.
ayeke iiplanga uthi:
Kubaluleke kakhulu ukusebenza kweTografiki ngenxa yengcinezelo abanayo xa befumaneka kuthi.
yeka i-porles bazalar
Ndisebenza kwipropathi kwi: Ibarra, Imbabura, Ecuador.
Ndiza kuba luncedo kakhulu kwisixhobo esinjenge-GPS.
Ndiya kubulela kakhulu ukukwazisa indlela izixhobo ezinokufumaneka ngayo.
Marcelo Conejeros uthi:
Ngaba baya kuba neChile?
Javier de Lázaro uthi:
Ukuchaneka kokuphakama kuncinci. E-Spain umyalelo we-50 cm kodwa asiqapheli ukuthetha oko kuza kuba ePeru.
Ndiyathemba ukuba kwimpendulo yangaphambili siphendule umbuzo. Ikhonkco. Ethetha bafumane onke amazwe, kufuneka sikhangele ngenyameko inyaniso ngenxa yokuba amaninzi amasiko kwaye ufuna unikezelo izixhobo ayenzeki yi umthetho. Siza kuqokelela uncedo kwiiGofumadas kule nkcukacha.
Ngeli xesha lifumaneka kuphela eSpain. Kodwa kunikezelwa inani lezicelo ezivela e-Argentina ukuya eMexico, siye sa sebenza ezi ziiveki ekufundweni kwenguqu entsha yePosify. Ukunyusa i-2.0 iya kuhlanganisa yonke loo ntsimi. Kuya kuba neendlela ezimbini zokuqwalasela:
Ukumisa i-2.0 ukuma yodwa: kunye nokusebenza okufanayo unokunika izicombululo ngeempembelelo ezingaphantsi kwemitha esiyiqikelela kwi-50 cm. Kuya kulahleka ngokukhawuleza kuba izicombululo azifumaneki kude kube ngumhla kamva.
Ukucwangcisa isiseko se-2.0 kunye ne-logger: kule meko uya kufuna iPC exhunyiwe kwi-intanethi apho i-Posify 2.0 logger izakuxhuma khona. Xa lo mgaqo-siseko sele ulinganiswe kwaye ubhalisiwe kwinkqubo yethu, i-Posify eyongezelelweyo ingasetyenziselwa ukuthatha imilinganiselo kunye nempazamo eqhelekileyo. Le nkqubo epheleleyo iyabiza kakhulu kodwa ivumela ukuba ibe nemilinganiselo ephezulu.
Siphinde sifunde iiprojekthi ze-ad-hoc zokusetyenziswa kwezinye ilizwe.
Siqikelela ukuba zombini iinkqubo ziya kufumaneka ekuqaleni kwe-2013 kwaye mhlawumbi ngoJanuwari.
Siyathemba ukuba ngale ndlela siyayihlanganisa zonke iimfuno eziye zachazwa kwezi mpendulo.
Ndiyathemba ukuba siphendule kwiingxelo zangaphambili. Ukuphinda emva kokubaluleka kuyimfuneko kwaye kuyabiza kodwa umsebenzisi wokugqibela uya kuba nzima kunokuba enze ngokwabo. Kukho nawuphi na umcimbi wokukhanya ovela kwabanye abavelisi ngokweendleko.
Ndiyathemba ukuba ngempendulo yangaphambili siphendule umdla wakho. Siya kuba neenkcukacha ezingaphantsi kwemitha phantse lonke ilizwekazi nangona ukufikelela kwiinkcazo esifumana eSpeyin kuya kubakho ukulungiselela ukucwangciswa okupheleleyo.
Ndiyathemba kwimbono yangaphambili esiphendule umbuzo.
Kwimbali yangaphambili ndiyathemba ukuba uphendule umbuzo.
Kuthengwa online. Ekugqibeleni kukho ikhonkco.
Kufumaneka kuphela eSpain
nceda ndifuna ukwazi apho ndingayithengela khona kwaye nokuba kunceda ukuba ndenze i-catstros zasemaphandleni
Angel Teran uthi:
Ngenxa yokubaluleka kwesixhobo, ndingathanda ukuxelelwa xa kuya kuthengiswa kwilizwe lam, iVenezuela?
URoland Hoffman Hernandez Centeno uthi:
I parese umdla eli qela innobador eziya kuba luncedo kakhulu ngenxa ngendleko ephantsi inportant kakhulu centimetric, kufuneka asasaze kumazwe afana wam eNicaragua, eya kuba luncedo kakhulu persdonas ukuba benze uphando nezobhalo kwaye iluncedo kakhulu cadastres kamasipala.
Ikhala umdla nikholwe ukuba eMexico olu hlobo yesixhobo kudlulela inkxaso yobugcisa kunye ......... ..that ukuba eSpeyin ukuba MobileMapper 100 nayo ebizwa ngokuba yi postprocessing iindleko ezongezelelweyo bakholelwa Posify wenza muchisisisima isithunzi kuqala ukuba ixabiso mali kwaye postprocessing ndithi ukuba eMexico ukuba oku kwenzeka iinkampani ezininzi ezifana Ashtech kufuneka enze into ukuze afumane intsimi lincinane yokunika ikhowudi postprocessing kwakunye endle software ... .saludos
Abadali be-Positive bathe ukuba okwangoku imveliso ifumaneka kuphela eSpain. Kodwa ngenani lokuphendula kweLatin American ngokuqinisekileyo uya kuba ucinga ngento enkulu.
UYudas Simon Tadeo Aquino Insfran uthi:
ngokunyanisekileyo nangokunyaniseka andizange ndiyiqonde impendulo
Kuya kubakho umdla ukuba iParaguay inendawo yokusetyenziswa kwilizwe lethu, kwaye ukuba kunjalo, kukho i-posobolity yokufumana nge-intanethi.
Ndiyathemba ukuba impendulo iya kupapashwa.
Manuel Medina uthi:
Ngeli xabiso lexabiso. ezo mpawu ngethemba kwaye kungekudala zenze uphuhliso olufanelekileyo ndongeza kuluvo lwe-LA yimakethi enokwenzeka, yenza uhlolo olukhawulezileyo kwaye uya kubona
jose suarez uthi:
Esi sixhobo sibaluleke kakhulu, siluncedo olukhulu kubachwephesha abaphambili, abadinga ukusetyenziswa kwe-GPS yophando rhoqo kwiindawo ekunzima ukufikelela kuzo nezikhululo, ndiyabulela ngolwazi oluthe kratya, malunga nokufumana izixhobo ngaphandle kwe Ukongeza okuhle kumhlobo ngakumbi ... imibuliso. arvicio J. Suarez. IVenezuela
URoberto Ramirez Hernandez uthi:
Ngomso mva, ndihlala eSan Jose del Cabo, bcs
Ndiyomdla kwiPosify, ndifuna nje ukwazi ukuba kusebenza kule ndawo
Ndiyomdla ukwazi ixabiso layo kwi pesos ye-mexican okanye elilinganayo kwi-dollar
Ndiyathemba ukuba unokunceda ngolu hlobo
Ngobubele uRoberto Ramirez
Javier de Lazaro Torres uthi:
Njengoko saphendule uKesar namhlanje senze intuthuko efunekayo eSpain. Siceba ukunyuka kwamanye amazwe afana neDominican Republic okanye iBolivia.
Singazenza uphuhliso oluya kusivumela ukuba singaxhomeki ekufumanekeni kweziseko. Ndithumelele i-imeyile kwaye sinokuyifunda iprojekthi ukuba iimilinganiselo ezenziwayo zininzi.
Intlawulo ibonakala kwiwebhusayithi yethu
Kuquka i-VAT, iindleko zokuthunyelwa kwi-Peninsula kunye nomnyaka wokuqala wokuxhaswa kwe-intanethi + inkxaso
Okwangoku i-Posify isasazwa kwi-peninsular yaseSpain kuphela.
Unyaka wokuqala wokuqhutyelwa kwe-intanethi yemilinganiselo ikhululekile. Ukususela ngelo xesha unako ukuqhubeka usebenzisa isevisi yokucubungula inthanethi kwixabiso le-99 € ngonyaka (i-VAT ifakiwe).
Ukusetyenziswa kwe-intanethi kubandakanya inkxaso nge-imeyile. Inkonzo yenkxaso yefoni ayinikezelwa.
Iphakheji ithunyelwa ngeNkonzo yeBlue Package Post. Ixesha lokuhambisa livela kwi-3 ukuya kwii-5 zeentsuku zoshishino.
jorge lacruz uthi:
Ndingathanda ukwazi ukuba liphi ixabiso lepost yeGPS enombulelo
Kuya kuba nomdla isindululo Posify, ngokuba e Colombia kukho namanene zasemaphandleni ezininzi ezifuna imilinganiselo nezobhalo ngqo ngakumbi encinane nelinika ibhrawuza Garmin 2 3 mitha kwaye akunakwenzeka emzimbeni ukulinganisa nesikhululo iyonke okanye theodolite . AbaPhando be-Guild yaseGolombia baza kuba nemihlali ukuba le teknoloji ikhona kwilizwe lethu.
umanyano weengcali kunye ne-arq. uthi:
Kucacile ukuba iphosa imitya ye-utm kwaye ndingathanda ukwazi ukuba iyakhawuleza na ukuphakama
kodwa nangoko ndingathanda ukuyithenga ePeru njenge-aria okanye i-antler xa ndikulindela ukuba iqela linomdla kum
ukuqinisekiswa kubonakala kunene kum, xa kuya kuba malunga neColombia kunye nokuba unokusebenza nayo. mbulela ulwazi
Siyabonga ngokucacisa uJavier.
Kangangoko ukuba benze inkqubela kwizicwangciso zabo, ndiya avísenlo blog okanye akhawunti Twitter ngenxa yokuba ndiyakholwa ukuba imarike Latin American nto intle kakhulu kodwa kuya kufuneka ukubona iimpawu ezahlukileyo kunye eSpeyin, njengoko nokungabikho kwezinto bajula ukuhlanganiswa kwamancinci.
Sawubona, uJan Carlos.
Oko kuxhomekeka kwilizwe okulo kunye nendawo ohlala kuyo. KwiLatin America, ukusetyenziswa kweTopcon neSokkia kuye kwasasazeka ngokubanzi.
Kukho izixhobo zokwenza isiTshayina ezithengayo, ezithengile kodwa ekusebenziseni amava endibonileyo awunelisekanga kakhulu ngenxa yenkxaso kunye noqeqesho.
Ingcebiso yam kukucinga malunga nokukhetha: iLeica, iTopcon, iSokkia, iGeomax okanye iSpectra. Ngokukhetha eyona isetyenziswa kwilizwe lakho kuba kuya kuba lula ukufumana ikhosi, okanye iingcali eziqeqeshiweyo.
Ngengqungquthela onayo, unako ukuya kwintcintiswano uze ubacele ukuba banikeze izixhobo ezifanayo.
Ukuba usitshela ilizwe olapha, sinokuqhagamshelana nommeli oya kukuncedisa.
Namhlanje senze intuthuko efunekayo eSpain. Siceba ukunyuka kwamanye amazwe afana neDominican Republic okanye iBolivia. Isixhobo singathengwa kwiwebhusayithi yeSpain.
Ndithumelele i-imeyile kwaye sinokufunda ukubeka phambili iPeru ngokumalunga namanye amazwe.
Ndifuna ukuthenga isitishi esipheleleyo, endikucebisayo, ezoqoqosho kunye ezilungileyo
UCésar Liborio Ortiz Espinoza uthi:
Inomdla, into esiyidingayo kwimisebenzi kwindawo yoNxibelelwano (iiNdlela) kunye nezinye ezihlobene. E-Peru, imisebenzi yophando lwezobugcisa isaphuhliswa ngokubanzi kwaye sifuna lolu hlobo lwezixhobo zokuphucula inkonzo yethu. I-Agradesco kwangaphambili ingqalelo kwaye ithanda ukucela ukuba yenzeni ukufumana izixhobo zolu hlobo kwelizwe lethu, ikakhulukazi eLima-Peru.